Coronavirus vao manomboka “Mety mbola avotry ny réflexo-thérapie.”
Manana anjara toerana lehibe ny mpitsabo amin’ny alalan’ny retsika na “réflexo-therapeute” ao anatin’izao fahamehana ara-pahasalamana izao, hoy ny mpisehatra ao anatin’izany etsy Analamahitsy, Yvon Andrianantenaina, fantatry ny rehetra amin’ny hoe Mr Aina.
Olana anefa dia tsy maintsy mifidy olona raisina izany aloha izahay hatreto. Tsy mba hary fitaovana toy ny dokotera mitsabo ny Coronavirus izahay, hoy izy. Ny olona noraisina hatramin’izay noho izany aloha no raisinay mba hisorohana ny fitangorongoronana. Manasitrana aretina maro tokoa ny fitsaboana nentim-paharazana toy itony “réflexo-thérapie” itony, hoy izy, saingy tsy maintsy mandray fepetra tahaka izany izahay. Na sanatria io Coronavirus io aza no misy voa izany tafiditra tsinahy ato, izany hoe, aretina vao manomboka dia sahiko ny milaza fa mety mbola avotry ny “reflexo-thérapie”, hoy hatrany ny tenany.